Umbuzo Prepar3D Usizo
2 iminyaka inyanga 1 edlule #19 by Dariussssss
Uma uhlangabezana nezinkinga, amaphutha noma uma eminye imibuzo mayelana Prepar3D Simulator, ngeposi lapha. Futhi lisitshelani kwamaphutha kanye nezixazululo for nezinkinga ezihlukahlukene namaphutha kule Simulator.
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #64 by lmaselli
Okokuqala Ngifisa ukuhalalisela nawe ngenxa yomsebenzi omkhulu uyenze.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngaqala usebenzisa "P3D V3.4", Isimo esichazwe kuqala ukufakwa kwaba "ZaseBalearic Island" futhi ngaqaphela inkinga yokuthi lisendaweni komhlaba LEMH futhi inkinga indawo in LESL.
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #65 by Dariussssss
Sawubona futhi ukwamukela Forum yethu.
Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze akusize kule ndaba. Lokho indawo, ingabe ukulandwa ifomu lapha noma kwenye indawo?
iminyaka 2 4 Sekwedlule amaviki #67 by lmaselli
Kwakuthinta kulayishiwe kusuka kuleli khasi. ZaseBalearic island V2.
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #77 by quietflyerBob
izincomo eziningi ngomsebenzi wakho, it 'iyithuluzi elihle kakhulu kithi! Ngithole inkinga nabathile add-on, isib Airbus A300 Multi livery pack; Ngiye efakwe Microsoft FS yami isiqondisi, futhi isebenza kahle kakhulu. Manje, mina w'd uthanda ukufaka iphakethe efanayo ngo P3D esemgwaqweni Program efanayo Amafayela (x86) kakhulu, kodwa autoinstaller does'nt ngivumele ukuba ukhethe P3D. Noma kunjalo, ngiye efakwe abanye abaningi iphakethe kusuka Rikooo kuzo zombili Sims; kwenzenjani? Ngiyabonga ngosizo lwakho
iminyaka 2 3 Sekwedlule amaviki #81 by Dariussssss
Kwadingeka lokhu iphakethe bezindiza FSX futhi kwakukuhle ngempela.
Angisona ujwayelene lobuchwepheshe ingxenye P3D kodwa, kungenzeka ukuthi une uhlobo oluthile zingqubuzana nale sims ezimbili. Ngibona on pics ukuthi inqobo ukuthi uke kokubili efakwe endaweni efanayo ... akusiwona into embi ukuze baye kubo efakwe oshayelayo ezahlukene kanzima, uma ungenza ngaleyondlela.
Isikhathi ukudala page: 1.658 imizuzwana